Nhau - Ndeupi musiyano uripo pakati pemarambi ezuva nemwenje webindu rezuva?
Solar landscape lights uye magetsi ezuva rebindumwenje uye marambi akajairika muguta, ndeemwe chete kunze kwezuva mwenje, zvese zvine mhedzisiro yekunakisa nharaunda yehusiku.Saka, ndeupi musiyano uripo pakati pemarambi ezuva rebindu nemwenje yezuva?
1. Kushandisa: Solar landscape mwenje ine basa renyika, ine yakakwirira yekushongedza, kunyanya yemigwagwa yemudhorobha, migwagwa yenharaunda, mapaki eindasitiri, mapaki, mabhandi egirinhi, masikweya, migwagwa yevanofamba netsoka, zvivanze nedzimwe nzvimbo dzekuvhenekesa husiku uye mwenje wepasi, solar. magetsi egadheni anonyanya kutarisisa kushanda, zvimwe zvikumbiro muchivanze, migwagwa yemudhorobha, nharaunda dzekutengeserana uye dzekugara, mapaki, zvinokwezva vashanyi, masikweya uye dzimwe nzvimbo dzekuvhenekesa nekushongedza.
2. Chitarisiko: Mukuwedzera, magetsi ezuva ane maitiro akasiyana-siyana, maumbirwo akasiyana-siyana, mavara akajeka ekusarudza kubva, asi magetsi ezuva rebindu anobhadhara zvakanyanya kutaridzika kwemarambi akachena uye mwenje nemigumisiro yekuvhenekera kweusiku.
3. Kuomerwa kwemaitiro: magetsi ezuva ezuva anowedzera zvishongo, zvakasikwa magadzirirwo avo uye maitiro akaoma zvikuru, asi magetsi egadheni anonyanya kutarisana nekushanda, saka dhizaini uye kugadzirwa kwekugadzira kuve nyore.
4. Chitubu chechiedza chezviedza zvebinduine hutano hwakanyanya, haina chiedza chinokuvadza, haizoratidzi mwaranzi.Uye iyo mwenje sosi ruvara yakapfava zvakanyanya, inobatsira kugadzira inodziya nharaunda.Uye ingave iyo dhizaini yekugadzira, kana zvinhu zviri nani pane zvakajairika marambi emumugwagwa chip.Magdheni magetsi akaiswa kunze, saka panowanzova nemabhanan'ana, uye marambi egadheni chinhu chakakwirira chekudzivirira mheni chemwenje.Yayo semiconductor core filament haityi kuzununguka, uye hupenyu hwayo hwesevhisi huchava hwakareba kwazvo.
Kazhinji, solar landscape lights uyesolar gardenmutsauko hausi wakawanda, uye zvino musiyano uyu wakatodiki.